Somaliya: Saraakiil ciidan oo ka socota Sweden oo Muqdisho booqdey - Wargane News
Home Somali News Somaliya: Saraakiil ciidan oo ka socota Sweden oo Muqdisho booqdey
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Sareye Gaas Maxamed Aaden Axmed, ayaa maanta oo Salaasa ah ku soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, Taliyaha Ciidanka Lugta ee dalka Sweden Brigadier General Stefan Andersson oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho. Labada Taliye oo kulan gaar ah ku yeeshay Xarunta Wasaaradda Difaaca, ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada ay dawladda Sweden siiso Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sareeyo Gaas Maxamed Aaden Axmed Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa ugu horeyntii uga mahad-celiyay Taliyaha Ciidanka Lugta ee dalka Sweden booqashada uu ku yimid magaalada Muqdisho markii ugu horeysay, waxana Taliyaha Xooga uu sheegay in Soomaaliya iyo Sweden ay yihiin wadamo saaxiibo ah dalka Sweden ayaa qayb xoogleh ka qaata sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo tababarka Ciidanka Xoogga dalka.
Brigadier General Stefan Andersson Taliayaha Ciidamada Lugta ee Sweden oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa Mahadcelin u jeediyay saraakiisha Ciidanka Soomaaliyeed sida wanaagsan oo ay u soo dhoweeyeen, waxaana uu sheegay in Soomaaliya dhibaato badan soo martay hase yeeshee ay ka soo kabanayso dhibaataadaas. wuxuna xusay in dawladda Sweden ay kordhin doonto taageerada ay la garab taagan tahay Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Todobaadyo ka hor waxaa magaalada Muqdisho soo booqdey saraakiil sar-sare oo ka socotey Midowga Yurub, gaar ahaan dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga.